Kukamurwa kwezvimwe zvekutenga pawebhusaiti yeApple zvinonyangarika | Ndinobva mac
Mazuva mashoma apfuura takaona nhau nezve kuremerwa kwekutenga pane zvigadzirwa zveApple. Kunyanya, mutemo wakanyorwa naApple mumazuva ekutanga ekumisikidzwa kweMacBook Air nyowani, Mac mini uye iyo nyowani iPad Pro yaive yakatemerwa kusvika pamakumi mashanu emaMac mayuniti pamunhu, 5 mauniti eApple uye zvakafanana mune iyo nyowani iyo IPad Pro Zvinotaridza kuti matanho aya ari kudzikiswa zvishoma nezvishoma uye muApple chitoro online unogona kutotenga zvese izvi zvishandiso pasina zviyero, kunze kwemamwe mamodheru MacBook uye iPad iyo inorambidzwa inochengetedzwa.
Nhau dzakaburitswa na Reuters Muvhuro wapfuura wakaratidza zvimwe zvinorambidzwa pakutengesa zvigadzirwa nekuda kwekushaikwa kwemayuniti. Uku kushomeka kwemayuniti kunogona kuve chiratidzo chekuti muChina vanga vasina simba rekugadzira mukati memwedzi iyo iyo coronavirus yakachengeta kugadzirwa yakavharwa zvakakwana pamwe nekupemberera kweChinese Nyowani Nyowani. Iye zvino zvinoita sekunge zvese zviri kudzokera kune zvakajairwa uye kuwedzera kwesitoko kunoita kurambidzwa pakutenga iva anochinjika.
Apple inochengeta zvitoro zvayo zvakavharwa kwese kwese pasirese, China pari zvino ndiyo chete nyika mune zvitoro zvichiri kuvhurwa uye ndipo panotapukirwa hutachiona zvakanyanya uye zviitiko chete zvinoonekwa (zvirinani iro ruzivo rwunosvika kwatiri ) izvo zvinobva kunze kwenyika uye zvese zvinoita kunge zviri pasi pesimba.
Isu tinovimba kuti zvese zvinodzokera kuchinyakare nekufamba kwemazuva, asi izvozvi Apple haina hurongwa hwekuvhura zvitoro zvekare uye kutenga pamhepo ichiri iyo chete yekutenga sarudzo kunze kweChina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Kukamurwa kwekutenga pane webhusaiti yeApple kunonyangarika
14 yemahara Mac mitambo yekuita kuti wega uwedzere kutsungirira